साउदीले बनायो पत्नी र छोरीहरुको निगरानी गर्ने एप ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalसाउदीले बनायो पत्नी र छोरीहरुको निगरानी गर्ने एप !
Home सुचना प्रबिधि साउदीले बनायो पत्नी र छोरीहरुको निगरानी गर्ने एप !
काठमाडौं : साउदी अरबमा मानिसहरु स्मार्टफोनको एक एपको सहयोगमा आफ्नी पत्नी र छोरीहरुको जासुसी गरिरहेका छन् । यो एपको माध्यमबाट उनीहरुको निगरानी पनि गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी सांसदहरुले पनि यसको समाधानको लागि गुगल र एप्पलका सीईओलाई आग्रह गरेका छन् । साउदीमा सन् २०१८ को अप्रिलमा साउदीमा साइबर आक्रमण रोक्न ल्याइएको नयाँ कानुनअनुसार पति–पत्नी एकअर्काको फोन चेक गर्न पाउँदैनन् । यस्तो गरेको पाइएमा ठूलो जरिवाना हुने नियम छ । साउदीमा ७५ प्रतिशत जनसंख्या सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् ।
मुकेश अम्बानीका छोरा आकाशको बिहेको कार्ड सुनचाँदी र हिराद्वारा जडित